Afganistan: Ha ka baxo Maraykanka Wardak - BBC Somali - Warar
Afganistan: Ha ka baxo Maraykanka Wardak
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 25 Febraayo, 2013, 22:15 GMT 01:15 SGA
Wardak waxay ku taalaa bartamaha Afganistan waana gobol muhiim u ah la dagaalanka Taliban.
Ciidamada qaaska ee Maraykanka ee jooga Afganistan ayaa loo qabtay laba toddobaad inay kaga baxaan gobolka muhiimka ah ee Wardak.
Afhayeenka Madaxweynaha Afganistan Hamid Karzai, ayaa sheegay in go'aanka la qaatay, kadib markii loo soo jeediyay eedaymo shaqaale Afganistan oo la shaqaynayay ciidamada Maraykanka ay ku lug lahaayeen dad Afganistaan u dhashay oo la waayay iyo kuwo la jirdilay.
Wardak ayaa waxaa ka socday howlgalo lagula dagaalamaayay Taliban, waxaana loo arkaa meel ay weerarka ka soo qaadaan Taliban markii ay weerarayaan Kabul.
Afhayeenka ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in eedeymaha ay u arkaan kuwo culus.
Argagixiso Hay'adaha "Shabaab ayay lacag siiyaan"
Toos ula soco xuska Mandela ee Soweto
Xuska Mandela oo billawday